High Speed ​​Automatic New Type nkenke asọfe Machine - China High Speed ​​Automatic New Type nkenke asọfe Machine Supplier,Factory -FEIHU
High Speed ​​Automatic New Type nkenke asọfe Machine
FH-JM ogologo nkenke ntụgharị a usoro nke ntụgharị usoro mepụtara anyị ụlọ ọrụ. O kwesịrị ekwesị ka nile di iche iche nke ngwaọrụ dị ka silk, hemp, yarn, na eri, etc. cylinder. The nlereanya nwere otu spindle otu akara nke nkiti ọrụ nke mpụga ojiji nke a nke oma asọfe yarn asọfe bobbin mwekota; 2 asọfe mgbe nile akara ọsọ; 3 mmanụ-mikpuru mgbagharị igbe; 4 mmanụ osisi refueling ọsọ 5 - 20 rev / min mgbanwe; 5 na a adụ ihu na ngwaọrụ na ihu ọrụ; 6 yarn erughị ala ike ukpụhọde; 7 drum yarn na esemokwu arapara mgbe nile mgbali kọntaktị; 8 Error 404 (Not Found)!!1
The requested URL /translate_a/t was not found on this server. That’s all we know. ; 9 Achịkwa agba ihuenyo akara na ndị ọzọ e ji mara na teknụzụ, ọdịdị nke ngwugwu bụ mara mma na udidi bụ siri. Nlereanya a bụ ezigbo oke maka elu-edu emeputa nke packaged yarn.
The requested URL /translate_a/t was not found on this server. That’s all we know. , ike ịzọpụta
Iji kọmputa akara, Broken yarn kwụsịrị, Metering ọrụ
Iji Soft mmalite，Naa ọnwụ, mfe iji
Iji n'ibu mgbochi tojupụtara, Soft ihu, Mee bobbin ọzọ edo
Q1: Anyị nwere ike na-aga gị factory ekwurịta ihe nkowa na chọpụta ọdịdị nke igwe?
A: Ee, nsogbu adịghị, welcome anyị ụlọ ọrụ ma na anyị ga-eme ihe kasị mma anyị na-enyere gị
Q2: Ọ bụrụ na anyị nwere nsogbu na igwe ma ọ bụ mmepụta, ị pụrụ isi nyere anyị?
A: Anyị na-enye ndị preventative Mmezi na Mgbe Sales Service. Anyị na-anwale igwe tupu nnyefe. Anyị na-enye sara mbara mmezi nhọrọ igbochi ngwá mbipụta tupu ha na-aghọ nsogbu. Ọzọkwa anyị na-enye otu afọ nkwa oge. Ọ bụrụ na e nsogbu na iji, i nwere ike na-agwa anyị. Anyị engineer otu ga-eme ihe kasị mma-enyere gị aka dozie nsogbu. Anyị injinia nwere ike na-aga gị ụlọ ọrụ ma na-enyere gị aka dozie nsogbu. Anyị na-enye ogologo ndụ ọrụ n'ihi igwe.
Previous : Kpọmkwem etinyere nkenke Cotton polyester ntụgharị Machine